R & D - Ningbo Imbaleki Co., Ltd.
I-01 WRN IZIKO LOKUPHILA
--- Gxila kuphando lwetekhnoloji yomoya
Iplatifomu yomoya / uvavanyo lokucoca ulwelo / uvavanyo lokutshintshiselana ngobushushu
Uhlalutyo lwengxolo / uvavanyo lokwahluka kwe-Enthalpy
02 GXILA KWITEKNOLOJI Ekhokelayo
Inkampani ineenjineli ze-R & D zobungcali ezibandakanyekayo kwicandelo lokuhlanjululwa kwezinto ezintsha, uyilo lweshishini, uyilo lwesikhunta, ulawulo oluzenzekelayo, uhlalutyo lovavanyo kunye nolawulo lweprojekthi, ukubonelela ngenkxaso kubasebenzi kubuchule bayo obuzimeleyo kunye notshintsho lwempumelelo yenzululwazi kunye netekhnoloji. Ukuthembela kwiqela layo elomeleleyo le-R & D kunye namava emveliso atyebileyo kuphuhliso lwemveliso kunye noyilo, imveliso yeNkampani kunye nolawulo lomgangatho inokuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye neemarike.
Iprojekthi yefilimu eluhlaza
Amandla angenanto angenanto
-Itheknoloji enenzuzo enkulu
Ukuqhubeka kophando lobuchwephesha kunye nokuyila kokona kukhuphiswano oluphambili lweWRN. I-WRN ifumene amalungelo abenzi asemthethweni nakwamanye amazwe angaphezu kwe-100 kwicandelo lezinto ezintsha, unyango lomphezulu oluhlaza, ukucoca umoya, inkqubo yokungenisa umoya embindini, ukuqonda, njl.njl.Ngaphandle koko, ikhethwe njengeShishini leNqanaba leNzuzo likaRhulumente kwi-IPRs, ukuThengisa okuKrelekrele Siwamisele amaziko anjengeLivable Air Institute kunye neZiko loNyango lomphezulu. Ngobuchwepheshe kunye nophando olutsha, sinokubona ikamva lethu ngokusekwe kwintengiso.
Iqela lobuchwephesha kumashishini amatsha
Iziko lophando lwamashishini